मुत्रमार्ग संक्रमणले महिलालाई किन धेरै सताउँछ ? • nepalhealthnews.com
प्रा.डा. राकेश बर्मा, प्रमुख कन्सल्टेन्ट युरोसर्जन || प्रकाशित मिति :2018-10-17 09:27:44
प्रायः महिलाहरुलाई केही स्वास्थ्य समस्या भएमा उनीहरु खुलेर बताउँदैनन् । योनी दुख्ने, पिसाब फेर्दा पोल्ने जस्ता समस्यालाई हल्का ठान्दछन् । चुप लाग्नुमा नै आफ्नो भलाई सम्झन्छन् । महिलाहरुको यही गलत सोचाइले उनीहरुको जीवन खतरामा पर्नसक्छ ।
मूत्रमार्गमा हुने ब्याक्टेरिया संक्रमणलाई यूरीनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (यूटीआई) भनिन्छ । यसले मिर्गौला, पिसाबथैली र मूत्रनलीलाई असर गर्छ । यो इस्केरेकिया कोलाई (ई.कोलाई) जस्ता संक्रामक जीवाणुको संक्रमणले हुने गर्छ ।
महिला र पुरुष दुवैमा यूटीआईको समस्या हुनसक्छ । तर शारीरिक संरचनाका कारण महिलाहरुमा मलद्धार र पिसाब द्धारबीचको दूरी निकै नजिक हुने भएकाले प्रजनन् स्थलमा ब्याक्टेरिया छिटै पुगेर संक्रमणको जोखिम बढाउँछ ।
फंगस, मिर्गौला, पिसाबथैली (युरिनरी ब्लाडर) एवं पिसाबनली (युरेथ्रा) मा भएका संक्रमणका कारण पनि युटिआई हुनसक्छ । करिब ४०—५० प्रतिशत महिलाहरुको जीवनमा एक पटक कुनै न कुनै किसिमको युटिआई समस्याका कारण उपचार गराउनुपर्ने अवस्था आउने गर्छ । महिलाहरुमा सिस्टाइटिस (मूत्रथैलीमा संक्रमण) र यूरेथ्राइटिस (मूत्रनलीमा संक्रमण) को समस्या धेरै देखिन्छ ।
कस्तो व्यक्तिलाई युटिआईको जोखिम बढी हुन्छ ?
लामोसमयसम्म पिसाब रोकेर राख्ने
दिसा गरिसकेपछि राम्रोसँग सरसफाइ नगर्ने
यौनांगको सरसफाइमा ध्यान नदिने
पत्थरी एवं मधुमेहको समस्या
मल्टी सेक्स पार्टनरसँगको यौन सक्रियता
रजनोवृत्तिपछि एस्ट्रोजन हर्मोनको कमी
मिर्गौलाको पत्थरी र प्रोस्टेट ग्रन्थी बढेको
पिसाब फेर्न प्रयोग गरिने क्याथेटरका कारण पनि युटिआईको समस्या हुनसक्छ ।
पिसाब फेर्दा पोलेको महसुस हुने
पिसाबको रंग गाढा देखिने
पेट एवं कम्मर दुख्ने, भारिपन महसुस हुने
पिसाब गन्हाउने एवं रगत देखिने
थकाई लागेको महसुस हुने
युटिआईको समस्यामा सम्बन्धित चिकित्सकको सिफारिसमा एन्टिबायोटिकको कोर्ष पूरा गर्नुपर्छ । यसका साथै पर्याप्त पानी पिउने, सरसफाइमा ध्यान दिने गर्नाले युटिआईको समस्यालाई न्युनिकरण गर्न मद्धत पुग्छ ।
(डा. बर्मा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)